Global Voices teny Malagasy » Rehefa Tratran’ny Aterineto Amin’ny Resaka Fanjanahantany Ny Miss RDC Sy Ny Mpanao Politika Frantsay Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Septambra 2016 15:41 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Frantsa, R.D. Kongo, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Tantara, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Ho fampatsiahivana, nilaza tao Sablé-sur-Sarthe ny 30 Août 2016 i Atoa.Fillon izay niditra nanao fampielezankevitra ho amin'ny fifidianana savaravina tamin'ny ankavanana , fa mikasika ny fanjanahantany dia tsy ”meloka tamin'ny faniriany hizara ny kolontsainy tamin'ireo vahoaka Afrikana i Lafrantsa ”. Fanambaran'i Fillon natao tao anatin'ny vanimpotoana fanolorana ny tetikasany famerenana mamolavola ny fandaharam-pianarana sy ny hasarobidin'ny fampianarana indray ny fireharehana ho an'i Frantsa any am-pianarana. Tsy nandalo fotsiny tao amin'ireo tambajotra sosialy izany fehezanteny izany. Nampiasaina be tamin'ny Twitter sy Facebook ny tenifototra #FizaranaKolotsainaAoFrantsa  mba hanangonana ho amin'ny toerana iray ny tenin'ilay kandidà amin'ny fifidianana ary mba hampatsiahivana azy ny dikan'ny vanim-potoana fanjanahantany ho an'ireo firenena voakasik'izany:
Andrana nokleary tao Reggane : alzeriana gadra miisa 150 nampiasaina ho toy ny olombelona fanaovana andrana https://t.co/A1RyI3KkBi  #FizaranaKolontsainaAoFrantsa 
Izany no antsoina hoe fizaràna, fitsangatsanganana kely iarahan'ny mpinamana #FizaranaKolontsainaAoFrantsa  pic.twitter.com/i6n8rEpOJ 
#PartageDeCultureInFrench  “mission civilisatrice”1911 noté le sein couvert afin de ne pas choquer les non-civilisés pic.twitter.com/9FPdwkpvgW 
Mampatsiahy ny lalàna 2005 izay nametraka ny fotokevitry ny ”anjara toerana miabo” notànan'ny fanjanahantany ny hevitr'i Atoa.Fillon. Manazava  ny mahatonga ny sangany frantsay ho afaka manafina mora foana ny ampahany iray manontolo amin'ny tantarany  ilay martinikey mpahay tantara, Gilbert Pago:
Ao anatina fotoana sarotra isian'ny fitomboan'ireo tia tanindrazana tafahoatra isika izao, fipoiran'ny hetsika fandàvana ny hafa, fanambaràna ireo sekta ara-drazana, fiforetana anaty, izany rehetra izany arahan'ny krizy erantany. Fa tokony hanontany ny fahateren-tsain'ireo mpitondra isika izay mitady hilomano hitety ny fihenan'ny fiarahana miaina. Mba handrosoan'i Frantsa, mba handrosoan'i Eoropa, mba handrosoan'ny olombelona rehetra ary mba handrosoanay Antillais, tsy maintsy lavina ny ”fandàvana” ny tantaran'izao tontolo izao. izany hoe ny tantarantsika rehetra. Betsaka no ilaina avy any amin'ny taranaky ny mpandresy sy ny taranaky ny resy. [Manampy izy ] Tsy fizarana kolontsaina izany, fa fahatairana mafy, raha ny amin'ny ratram-po noho ny resaka fikatsahana harena, tsena sy ny hery mpamokatra ary ny fandringanana olombelona, sivilizasiona sy fanànana hita maso.
Efa nilaza tamin'ny 2007  i Alain Manbackou fa na ahoana na ahoana:
Ho an'i Dorcas Dienda, ilay tanora kandidà amin'ny fifidianana, ny fanontaniana mikasika ny vanim-potoana fanjanahantany dia tonga tamin'ny fomba hafa. Napetraky ny mpanolotra taminy nandritra ny fandaharana amin'ny televiziona Miss RDC 2016 tamin'ny 30 Aogositra, ny fanontaniana ”ny marika vita ao Kôngô” oharina amin'ny marika tandrefana. Nanazava ary i Dienda fa ”Kinga lavitra noho ny olo-mainty ny olona fotsy hoditra ”. Ity misy ampahan'ilay fandaharana:
Juste scandaleux de tenir ces propos : « l’homme blanc est plus intelligent, que l’homme noir ». #DorcasDiendaOut  pic.twitter.com/ncNkpoHgED 
Tsy vao voalohany izao ny tantaran'i Afrika no manala baraka ireo olo-malaza. Ilay kabary malaza nataon'i Nicolas Sarkozy tao Dakar tamin'ny 2007 izay milaza fa ny olona afrikàna dia ”tsy tafiditra tao anatin'ny tantara ” dia mbola ao anatin'ny fahatsiarovan'ny maro. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/06/88035/
 meloka tamin'ny faniriany hizara ny kolontsainy tamin'ireo vahoaka Afrikana i Lafrantsa: http://www.jeuneafrique.com/353496/societe/france-francois-fillon-colonisation-sapparente-a-partage-de-culture/
 manafina mora foana ny ampahany iray manontolo amin'ny tantarany: http://la1ere.francetvinfo.fr/l-historien-gilbert-pago-repond-fillon-les-vainqueurs-exaltent-leur-puissance-en-masquant-leurs-crimes-et-leurs-echecs-394653.html
 Efa nilaza tamin'ny 2007: https://fr.globalvoices.org/2007/08/24/283/
 Kinga lavitra noho ny olo-mainty ny olona fotsy hoditra: http://www.jeuneafrique.com/354666/societe/lhomme-blanc-plus-intelligent-lhomme-noir-propos-dune-candidate-concours-miss-rdc-provoquent-tolle/
 tsy tafiditra tao anatin'ny tantara: https://fr.globalvoices.org/2007/08/23/277/